करारका एक चिकित्सकका भरमा मनाङ, कोरोना संक्रमित देखिएपछि समस्या बढ्यो - samayapost.com
करारका एक चिकित्सकका भरमा मनाङ, कोरोना संक्रमित देखिएपछि समस्या बढ्यो
rss २०७७ भदौ २४ गते १२:४७
हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा करारका एक चिकित्सकका भरमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । जिल्ला अस्पताल मनाङमा जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । एक चिकित्सकले जिल्लाका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । मनाङमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले अझ समस्या थपिएको छ ।
सुगम क्षेत्रमा धेरै चिकित्सक रहने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने चिकित्सकको अभाव हुने गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या र बिरामीको अवस्था हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै जनशक्ति हुनुपर्ने हो तर कतिपय सामग्री जनशक्तिको अभावमा चलाउनसमेत सकिएको छैन । जिल्ला अस्पताल मनाङमा मेडिकल अधिकृत एवं कोरोना फोकल पर्सन डा सन्तोष अधिकारी मात्रै हुनुहुन्छ ।
मनाङमा भएका दक्ष जनशक्तिका रूपमा एक चिकित्सकलाई पनि स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले सरुवा गरी पोखरा तानेपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । मनाङ जिल्लाभरको स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल पनि एउटै र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक पनि एक जना मात्र रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धु्रव गिरीले जानकारी दिनुभयो । “कोभिडका बिरामीका लागि उपचार गराउन कस्तो बिरामी हुन्छ, सोअनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँको अस्पतालमा एक जना मात्रै चिकित्सक हुनुहुन्छ, जिल्लावासीको उपचारका लागि एक जनाले मात्रै गर्दा समस्या र चुनौती छ”, प्रजिअ गिरी भन्नुभयो, “जिल्लाको एक मात्र चिकित्सक बिदामा बस्नुपर्ने वा बिरामी परे अझ बढी समस्या हुन्छ, यो समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको छ ।”
अहिले एक मात्र डा अधिकारी दैनिक बिरामी र कोरोना सङ्क्रमितको सेवामा व्यस्त हुनुहुन्छ । दुई जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि जिल्ला अस्पताल मनाङमा दरबन्दीका चिकित्सक एक जना पनि छैनन् । अहिले जिल्लाको अस्पतालबाट सेवा करारका एक चिकित्सकले मात्रै दिँदै आएको स्वास्थ्य कार्यालय मनाङका प्रमुख बद्री आचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत चार कर्मचारी करारका छन् । जिल्लामा दुई चिकित्सक, दुई स्टाफ नर्स, अहेव, सहयोगी गरी ११ जनाको दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म अस्पतालमा करारका चिकित्सकले मात्रै स्वास्थ्य सेवा दिइरहनुभएको छ । स्वास्थ्यका प्राय धेरैजसो कर्मचारी करारका छन् । उहाँका अनुसार हाल जिल्ला अस्पतालमा डा अधिकारी, नर्स बिना पौडेल, सिनियर अहेव रहमत अन्सारी र ल्याब टेक्निसियन प्रकाश रोक्का हुनुहुन्छ ।
किशोरकिशोरीमा सबैभन्दा बढी मानसिक समस्या
पाँच बर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकामा देखियो रुबेला, उच्च सतर्कता साथ उपचार हुँदै
पिसाब पोल्ने समस्याबाट छुटकारा पाउने यि हुन् घरेलु उपाय
चस्मा लगाउने व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण कम !
​गुप्ताङ्गको दुर्गन्धले हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
आफ्नो शरीरमा ‘नोभिचोक’ प्रयोग भएको नाभाल्नीको दावी
अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन, सेवा कसरी लिने ?
अब मोबाइलबाटै विप्रेषण पठाउन सकिने
मण्डिखाटारमा कार दुर्घटना
यी ६ स्थानमा शनिबारसम्म भारी बर्षको सम्भावना, मौसम विभागले भन्यो-सर्तक रहनुहोस्